Iska hor imaad xabado la isu adeegsaday oo lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan booliska… – Hagaag.com
Iska hor imaad xabado la isu adeegsaday oo lagu dhaawacay ciidamo ka tirsan booliska…
Iska-hor-imaad qaatay ku dhowaad 8 saacadood ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Nicetown-Tioga, magaalada Philadelphia ee dalkaasi Mareykanka, waxaana dagaalkan lagu dhaawacay lix ka mid ah ciidamada booliska gobolkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu dhex maray hal nin iyo boolis badan, waxaana uu qarxay xilli ay boolisku ka warheleen in howlo daroogo-iibin ay ka socoto deegaanka Nicetown-Tioga, sidaasna ay ugu bexeen markii ay meesha tageena rasaas laga horkeenay.
Dagaalka oo dabadheeraaday islamarkaana qaatay 7 saac iyo bar in ka badan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qeyb-galay ciidamada gaarka ah ee loo yaqaan SWAT kuwaas oo ugu dambeyn soo afjaray dagaalka islamarkaana gacanta ku dhigay dambiilihii.
Dambiilaha oo guri deegaanka ku yaal galay ayaa dhaawacay lix boolis ah oo isbitaalka loo qaaday, waxaana uu qafaal ahaan u qabsaday dhowr ruux oo ugu dambeyn lasoo bad-baadiyay.
Dadka deegaanka oo warbaahinta uga sheekeynayay dhacdadan ayaa waxaa ay qaarkood sheegeen in mudadii uu iska-hor-imaadku socday ay xaafaddu aheyd mid jawigeedu baddalmay islamarkaana ay u ekaatay magaalooyinka dagaallada ka socdaan caalamka ee ay tv-yada ka daawadaan.
“Waxaanu maqleynay mudo sideed saac ku dhow dhawaqa rasaasta, qaraxyo baaruud, waxaana sidoo kale arkeynay xaafadda oo laga kala cararay oo haawaneysa”, sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah dadka xaafadda.
Saakay waaberigii ayay boolisku sheegeen in lasoo qabtay nin ay ku tuhmayaan in uu dhacdadan ka dambeeyay islamarkaana uu iminka xiran yahay.